Uumeeye baraf Flake ah
Jooji mashiinka barafka
Mashiinka barafka tuubada 20T
10T Mashiinka barafka
Mashiinka barafka tuubada 5T
Mashiinka barafka tuubada 3T
Mashiinka barafka jajaban ee 0.5T
500kg / makiinada barafka flake + 300kg weelka kaydinta barafka. Mashiinka wuxuu leeyahay naqshad-fur iyo-ciyaar. Waxay diyaar u tahay sameynta barafka ka dib isku xirnaanta fudud ee biyaha iyo korontada. Barafku wuxuu soo baxayaa 5 daqiiqo gudahood kadib markii isticmaaluhu riixo badhanka bilowga. Dhammaan shaqooyinka sameynta barafka waxaa si toos ah loogu sameeyaa iyadoo ay gacanta ku hayaan PLC. Nidaamku wuxuu iska ilaalin doonaa biyo yaraanta / biinka barafka buuxa / korontada oo aan xasillooneyn / heerkul aad u sarreeya ama qabow / ama noocyo kale oo fashilaad ah. W Uumiga loogu talagalay ...
Awoodda orodka: 9.375 KW.
Heerkulka barafka: Ka jar 5 ℃.
Tayada barafka: Transparent iyo crystal.
Dhexdhexaad baraf: 22mm, 29mm, 35mm ama haddii kale.
Qaboojiyaha: R404a, R448a, R449a, ama kale.
Koronto: 3 waji tamar koronto warshadeed.
Awood wax soo saar maalinle ah: 3000 kgs oo ah tuubooyin baraf ah 24 saac.
Xaaladda shaqada ee caadiga ah: 30 'daarmayaay'e iyo 20 temperature heerkulka biyaha.
Isticmaalka korontada: 75 KW koronto si loo sameeyo 1 tan oo kasta oo baraf ah.
Awoodda orodka: 15.625 KW.
Awood wax soo saar leh maalin walba: 5000 kgs oo ah tubooyinka barafka 24 saac.
Awoodda orodka: 31.25 KW.
Awood wax soo saar baraf maalin kasta: 10,000 kgs oo tuubooyin baraf ah 24 saac.
Mashiinka barafka jajaban ee 0.3T
Magaca sumadda: Herbin Ice Systems Faahfaahinta mashiinka barafka ee kuleylka ah 0.3T / maalin. Magaca badeecada: Mashiinka barafka Cube Model: HBC-0.3T Ice Ice wax soo saar maalinle ah: In ka badan 300kgs 24kii saacadood Xaaladda shaqada Heerka caadiga ah: 30C heerkulka daaragada iyo 20C biyaha tubada cabbirka Barafka: 22x22x22mm Awoodda keydinta barafka: 280kgs Kondenser: Hawo / Biyo qaboojiyey Awood sahay Koronto hal wajiga Fiiro gaar ah: Awoodda barafka mashiinku wuxuu ku saleysan yahay heerkulka 30C iyo 20C heerkulka biyaha ee gudaha. W ...
Awoodda orodka: 62.5 KW.
Awood wax soo saar leh maalin walba: 20,000 kgs oo tuubooyin baraf ah 24 saac.
5T mashiinka barafka flake
Mashiinka barafka jajaban ee 5T / maalin si loo sameeyo 5 tan oo baraf ah maalin kasta, 24 saacadood gudahood. Waxaan bixinaa mashiinka barafka jaban ee 5T / maalin. Tayo sare leh oo leh dammaanad 2 sano ah. Waxaan nafteena u hibeynay mashiinnada barafka jajaban tan iyo 2009, mashiinadeena ayaa daboolaya inta badan suuqyada Yurub iyo Mareykanka Waxaan rajeyneynaa inaan kuugu adeegno tikniyoolajiyadeena barafka jilicsan ee xasiloon. Mashiinka barafka jajaban ee 5T / maalin si loo sameeyo 5 tan oo baraf ah maalin kasta, 24 saacadood gudahood. 1. Baraf ay sameeyeen 5T / maalintii flake ic ...
30T mashiinka barafka flake
Awoodda orodka: 93.75 KW.
Dhumucda barafka: 1.8-2.2mm.
Awoodda keydinta barafka: 15,000 kgs oo jajab ah ama la qaabeeyey.
Awood wax soo saar baraf maalin kasta: 30,000 kgs oo jajab ah baraf 24 saac.
20T mashiinka barafka flake
Awoodda keydinta barafka: 10,000 kgs oo jajab ah ama la qaabeeyey.
Awood wax soo saar baraf maalinle ah: 20,000 kgs oo jajab ah baraf 24 saac.
10T mashiinka barafka flake
Awoodda keydinta barafka: 2500 kgs oo jajab ah ama la qaabeeyey.
Awood wax soo saar leh maalin kasta: 5000 kgs oo jajab ah baraf 24 saac.
3T mashiinka barafka flake
Awoodda keydinta barafka: 1500 kgs oo jajab baraf ah ama loo habeeyay.
Awood wax soo saar maalinle ah: 3000 kgs oo baraf ah 24kii saac.